Email Security — MYSTERY ZILLION
December 2008 edited February 2009 in Help Desk
ကျွန်တော် အခုနောက်ဆုံး ireborn.net မှာတင်ထားတဲ့ ဆောင်းပါးပါ။ ဖတ်ပြီး ဘယ်လိုနေလဲ ပြောပေးပါဦးဗျို့.... :103::103::103:
ကျွန်တော် ပြန်မှတ်မိသေးတယ်။ ဟိုးအရင်က ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး email account ရတုန်းကပေါ့ AOL ကိုစသုံး ခဲ့တာ စသုံးခါစမှာပဲ AOL ကနေ ကံစမ်းမဲ ပေါက်ခဲ့့ပါတယ်။ ပျော်လို့ မဆုံးဘူးပေါ့ နေ့ချင်းညချင်း သဌေးကြီး တစ်ယောက် ဖြစ်လာမဲ့ အတိုင်း စိတ်ကူးတွေယဉ် အမျိုးမျိုး တွေးတောခဲ့တယ်။ ဘာမှ တွေးတော မနေတော့ဘူး ကံစမ်းမဲ ပေါက်တယ်ဆိုတဲ့ mail ကို ဖွင့်ဖတ်ပြီး form တွေကို ဖြည့်လိုက်တယ်။ Submit နှိပ်ပြီးသိပ် မကြာခင်မှာ ကျွန်တော့် PC crash ဖြစ်ပြီး restart ကျသွားတယ်။ သိပ်မကြာ ခင်မှာပဲ ကျွန်တော့် mail ထဲကို spam mail တွေ ထောင်ချီပြီး ရောက်လာ ပါလေရော...။ ကျွန်တော် ဒီ spam တွေကို အချိန် တော်တော် ဖြေရှင်းလိုက် ရတယ်။ ဒီလို ဘာကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ရလဲ ပြန်စဉ်းစား ကြည့်တော့ ကျွန်တော် ဗဟုသုတ နည်းခဲ့လို့ ဆိုမမှား နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဒီအကြောင်း အရာတွေနဲ့ ပါတ်သတ်လို့ အချိန်ယူ လေ့လာပြီး email security အကြောင်းကို ပြန်ပြီး ရေးချပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ဟာ email security အကြောင်းကို နားလည်ပြီးသား ဆိုရင်တော့ ရှည်လျှား လွန်းလှတဲ့ ဒီဆောင်းပါးကို ကျော်ပြီး ဖတ်လိုက်ပါ။
Email စတင် အသုံးပြု သူတွေဟာ သူတို့ email address ကို အိမ်လိပ်စာ ပုံစံမျိုး လို့သတ်မှတ် ထားပါတယ်။ ဒါဟာ မှားယွင်းနေပါတယ်။ Email ဆိုတာ သင့်အိမ်ကို၀င်ဖို့ အတွက် သော့နဲ့ တူပါတယ်။ အိမ်ရှေ့ တံခါးတွက်ရော နောက်ဖေးတံခါးတွက်ရော သော့တစ်ချောင်းထဲ သုံးမှာဆိုရင် သင့်အိမ်ဟာ လုံခြုံမယ်လို့ သင်ထင်ပါသလား? ဒီလို သဘောတရား ပါပဲ ကျွန်တော် အကြံပေးချင်တာကတော့ အနည်းဆုံး email account ကို သုံးခုလောက် အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ဆိုလိုတဲ့ သဘောကတော့ Google က အခမယ့် ရနိုင်တိုင်း အတိုင်းအဆ မရှိ account တွေလုပ်ပြီး သုံးနေဖို့ မဆိုလိုပါဘူး။
သင့်ရဲ့ ပထမ email account ဟာ အလုပ်အကိုင်နှင့် ငွေကြေးအတွက် လုပ်ကိုင် ရတဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေမှာ ဆက်သွယ်ဖို့ အတွက် ထားသင့်ပါတယ်။ ဒီ email address ကို လူတိုင်းသိအောင် ကြော်ငြာနေဖို့ မလိုပါဘူး။ သင့်ရဲ့ ဒုတိယ email account ကိုတော့ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေ အသုံးပြုဖို့အတွက် သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ email address ကိုလဲ လူတိုင်းသိအောင် ကြော်ငြာနေစရာ မလိုအပ်ပါဘူး။ သင်နဲ့ နေ့စဉ် ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံနေတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်း သိရုံလောက်နဲ့ လုံလောက်ပါတယ်။ တတိယ email address ကတော့ newsletter တွေ၊ သာမာန် လုံခြုံမှုသာ ရှိတဲ့ website တွေမှာ register ပြုလုပ်မှုတွေနဲ့ သင့်ရဲ့ blog တို့ community အသုံး ပြုမှုတွေအတွက် သင်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ဒီလို mail account သုံးခုအတွက် ပထမ နှင့် ဒုတိယ တစ်ခုကို အာမခံချက် သို့မဟုတ် ငွေကြေးဖြင့် ပေး၀ယ်ရသော email services မျိုးမှ အသုံးပြု သင့်ပြီး။ တတိယ mail account အတွက်ကတော့ အခမဲ့ ရနိုင်တဲ့ Google တို့ yahoo တို့မှ အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ တတိယ email account ထဲကို spam mail တွေ သေခြာပေါက ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ သင့် email account ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ spam mail တွေကို အနည်းဆုံး ၆ လတစ်ကြိမ် ရှင်းလင်း ပေးသင့်ပါတယ်။
3. Not closing the browser after logging out
သင်ဟာ သင့်ရဲ့ email account တွေကို စာကြည့်တိုက်တွေ ဒါမှမဟုတ် public access centre တွေအသုံးပြုတယ် ဆိုရင် Logout လုပ်ရုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူး။ တစ်ချို့ web mail services တွေဟာ သင့် email address ကို ဖော်ပြပေးထားတတ်ပါတယ်။ Password ကိုတော့ ဖောပြပေးခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင်ဟာ သင့် email account ကို logout လုပ်ပြီးတာနဲ့ browser ကိုပါ ပိတ်ပြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ သင့်ရဲ့ email address အတွက် စိတ်ချမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။
အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ အချက်လို့ အမွှန်းတင်ပါရစေ။ Public access centre တွေမှာ သင်ဟာ အသုံးပြုတတ်သူဆိုရင်တော့ အမှတ်မထင် Forgetting password ကို ပြုလုပ်ထား တတ်မိပြီး သင့် email ရဲ့ password ကျန်ခဲ့ နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် browser မှာ ရှိနေတဲ့ cache တွေ၊ history တွေ နဲ့ cookie တွေကို ရှင်းလင်း ပြစ်ခဲ့ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Browser မှာရှိနေတဲ့ cache တွေ၊ history တွေ နဲ့ cookies တွေကနေ သင့်ရဲ့ email account ကို hacker တွေရရှိ သွားနိုင်ပါတယ်။ How to delete browser cache, history, password and cookies ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်မှာ လေ့လာ နိုင်ပါတယ်။
5. Not using the Blind Carbon Copy (BCC) Option.
သင်ဟာ email တစ်စောင် ရေးသားပြီး သင့်သူငယ်ချင်းတွေကို ပို့မယ်ဆိုပါစို့ ဒီလိုပို့တဲ့အခါမှာ CC ထက် BCC ကို သုံးသင့်ပါတယ်။ BCC ဟာ မည်သူတွေကို mail ပို့လိုက်တယ်ဆိုတာ တစ်ဦးချင်း ဖော်ပြပေးမှု မရှိပါဘူး။ ဒါဟာ သင်ရော သင့်မိတ်ဆွေတွေ အတွက်ပါ အကြိုးရှိစေပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာ To မှာပဲ ပုံမှန် တစ်စောင်ဆီ ရေးသားပြီး တစ်ယောက်ဆီ ပို့မယ်ဆိုရင်တော့ ကိစ္စ မရှိပါဘူး။ BCC နဲ့ မပို့မိလို့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဆိုးကြိုးကတော့ spammer တွေဟာ သင်တို့ထဲက တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ email address ရလိုက်တာနဲ့ အားလုံးရဲ့ email address ကိုရသွားနိုင်ပါတယ်။
6. Spamming asaresult of forwarding email.
ဒီနည်းကတော့ spammer တွေအကြိုက်ပါ။ Email ကို Fwd လုပ်တဲ့ လူတွေ မြန်မာမှာ အများကြီးပါ။ ဘာမဟုတ်တာကိုလဲ Fwd လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ မှားယွင်းနေပါတယ်။ Fwd ဟာ သင့် mail account ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ သင့်မိတ်ဆွေတွေရဲ့ email address တွေ အားလုံးကို အခြားတစ်ယောက်က အလွယ်တစ်ကူ ရသွားနိုင်ပါတယ်။ Fwd လုပ်ခြင်းဟာ သင့် email address ကို ဂရုမစိုက်ခြင်းထက်ပင် ကျော်လွန်ပြီး အခြားသူများရဲ့ email address ကိုပါ မထိလေးစား လုပ်နေတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။
7. Don't check from unknown sender
ဘယ်သူ ဘယ်၀ါ ပို့မှန်းမသိတဲ့ email တွေကို မစစ်သင့်ပါဘူး။ အခုဆိုရင် mouse over နဲ့တင် သင့်ရဲ့ browser မှာရှိတဲ့ cookie တွေကို hackerတွေက သိမ်းပိုက် နိုင်နေပါပြီ။ ဘာမှန်းမသိတဲ့ link တွေကိုလဲ click အရမ်း မလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ဒါကတော့ သိပ်ပြောဖို့မလိုဘူး ထင်ပါတယ်။ Link တွေကို click ကောင်းမှုကြောင့် Private cam ဟာ နေ့ချင်းညချင်း မြန်မာမှာ မွှေနှောက် သွားနိုင်တာပါ။
ဖော်ပြပါ အချက်တွေဟာ သင့်ရဲ့ email security အတွက် အကြိုးသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကာကွယ်ခြင်းဟာ ကုသမှုထက် ကောင်းပါတယ်။ ဒီနေ့ ဒီလိုခေတ်မှာ email ဟာတန်ဖိုးရှိလာပြီလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ တစ်ချို့တွေက ငါတို့ account ထဲမှာ ဘာမှ အရေးကြီးတာ မရှိဘူး ဆိုပြီး ပေါ့ကြပါတယ်။ ဒါဟာ မှားပါတယ်။ သင့်အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ သင့်ပါတ်၀န်းကျင်က email address ကို သင်သုံးနေတယ် ဆိုတာ လက်ခံထားတဲ့အတွက် မသမာသူတွေ လက်ထဲရောက်သွားခဲ့ရင် သင့်အပေါင်းအသင်းတွေရော သင့်အတွက်ရော ကောင်းတာဆိုတာ ဖြစ်လာဖို့ မရှိနိုင်တော့ပါဘူး။
အရမ်းကောင်းတဲ့ သတိပေးချက်လေးတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ .........................
email တွေမှာဖြစ်လာတတ်တဲ့ problem တွေက အမျိုးမျိုးသော အသစ်တွေထွက်လာဆဲဖြစ်သလို .... user တွေအနေနဲ့လဲ မရိုးနိုင်အောင်ကြုံနေရဆဲပါပဲခင်ဗျာ ................ :2:
The three main ways that our email can be hacked are
(1) by receiving mail that seems to be coming fromasocial engineering team like gmail oratrusted web site.
(2) by cookies
(3) by key logger
As Ko zmtin says, never click any link that u dont know and don't open any mail without sender; Log out when u r about to leave; delete cookies and history before u close ur browser; also check processes of the task manager and kill supicious processes. But, there are still other ways that ur mail can be hacked.
i appreciate with "witch83" and don't open the mail that is not similar to you and also you have to check the sender name and the header of the mail...if it is about the some kind of lottery or the message that invite to sign up. Pls becareful about the invitation letter
spam mails တွေကို auto delete လုပ်ပေးလို့လဲရပါတယ်၊ လုပ်နည်းကိုတော့ အောက်ကလင့်မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
တချို့လူတွေက အဲလိုလုပ်မထားကြပါဘူးတဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ trash မှာ သူတို့ဖျက်မိတာတွေကို ပြန်ပြန်စစ်တဲ့အတွက် spam mails တွေ trash ထဲမှာရောထွေးနေရင် အားလုံးရောရှုပ်နေမှာ စိုးလို့တဲ့။ ဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စမ်းကြည့်ချင်သူများအတွက် ...
Auto-delete spam mails
Thread ဖွင့်ထားတာလေးက ဆင်တူနေတာနဲ့ ဒီအောက်မှာပဲ ရေးလိုက်ပါ့မယ်...
အခုကျနော်တို့တွေ ကြုံတွေ့နေရတာကတော့ Forward Mail တွေပါပဲခင်ဗျာ....
ကျနော့်အနေနဲ့ကတော့ ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးတွေ အများအပြားကို တွေ့မြင်နေရပါတယ်...
အဓိကက မိမိမိတ်ဆွေတွေကိုသာလျှင် သီးခြားပေးထားတဲ့ ကိုယ့် Mail နာမည်ကို သူများတွေ ရကုန်တာပါ...
နောက်ဆက်တွဲကတော့ Forward Mail တွေ လာပါတယ်...
ဘယ်သူမှန်း ဘယ်ဝါမှန်းမသိပဲ.. ကိုယ့်ကို Invite လာပါတယ်....
နောက်တစ်ခါ... သူတို့ Forward Mail တွေကနေ တဆင့်ပဲ အဆင့်ဆင့် ဆက်ပြန့်ကုန်ပါတယ်...
ဒီမှာတင် spammer တွေ လက်ထဲကို တစ်နည်းနည်းနဲ့ ရောက်သွားတော့ ကျနော်တို့ mail တွေမှာ spam တွေ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ထိုင်ရှင်းနေရတဲ့ spam တွေလည်း မနည်းတော့ပါဘူး...
အများစုကလည်း ဂရုတစိုက်နဲ့ fwd: လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် BCC: နဲ့ ပို့ပေးကြတာ မဟုတ်ပါဘူး...
To: ဒါမှမဟုတ်.. Cc: ကနေ တဆင့်ပဲ ပို့နေကြတာပါ.... :14:
သီးသန့် Private Mail လုပ်ပါတယ်ဆိုမှ ကိုယ်မသိပဲ လာလာ invite လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကလည်း စိတ်ပျက်စရာပဲပေါ့....
ကျနော် အင်တာနက်စသုံးခါစ Chatting ဝင်တုံးကတော့ ဒီလိုလာရင် ပျော်တာပေါ့ဗျာ...
အခုတော့ ကျနော်လည်း မပျော်နိုင်တော့ပါဘူး.... Security ကိစ္စတွေပါ ပါလာပါပီ...
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း Forward Mail တွေမှာ ပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့
၁။ ပုံလှလှလေးတွေကို ဝေမျှပေးတာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်....
၂။ သတင်းတစ်ခုခုကို ဝေမျှပေးတာဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်...
၃။ Blog Post တွေကို ဝေမျှပေးတာဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါမယ်....
၄။ နောက်တစ်ခုကတော့ ဒီစာကို ဘယ်နှစ်ယောက်ပြည့်အောင် မဝေရင်ဖြင့် ဘာဖြစ်မယ်.. ညာဖြစ်မယ်ဆိုပီး ခြိမ်းခြောက်တာမျိုးနဲ့ လာတဲ့ဟာတွေပါ....
ဒါတွေကတော့ အဖြစ်များတဲ့ Fwd: mail တွေပါ...
ဒီမှာ ကျနော်စိုးရိမ်တာကတော့.... Fwd: Mail တွေထဲမှာ trojen တွေ ဘာတွေ ထည့်လာရင် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပါ....
Anti Virus တိုင်းလည်း အကောင်တွေ အကုန်အစုံသိနိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး...
အထူးသဖြင့် homemade မိမိဘာသာရေးထားတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်ပေါ့.....
ကြားဖူးတာလေးပါ... Picture File တွေနဲ့ spyware တွေနဲ့ တွဲပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပါ...
Fwd: mail တွေမှာ ပုံတွေ embed လုပ်ထားတာတွေ ပါပါတယ်...
အဲ့ဒီပုံတွေ နောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေ ပါဝင်နေမယ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်ပါ့မလဲခင်ဗျာ....
အခုဆိုရင်ပဲ spyware တွေက Generation တွေက အများကြီးဖြစ်လာပါပီ...
Remote Keylogger... Golden Eye ... Rat... PoisonIVY စတဲ့စတဲ့ နည်းပညာတွေကလည်း ဖိုရမ်တွေ လိုက်ဖတ်ကြည့်ရင် တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးနိုင်ပါဘူး...
ဒီကြားထဲ ကိုယ်တိုင်ရေး လက်ဖြစ်အကောင်အသစ်တွေကလည်း ဆက်တိုက်ပေါ်ထွက်နေဆဲပါပဲ... :106:
အဲ့ဒီ Picture File တွေထဲကို spyware တွေက မည်ကဲ့သို့တွယ်ကပ်လာနိုင်ပုံနဲ့...
မည်ကဲ့သို့ ထို spyware ပါတဲ့ fwd: mail တွေကို ရှောင်ရှားနိုင်မလဲဆိုတာကို ဝိုင်းဝန်းအဖြေရှာဖို့ပါပဲခင်ဗျာ....
မိမိသူငယ်ချင်းတွေက မိမိကိုဖတ်စေချင်၍ ပို့ပေးထားသော Mail များကို မဖွင့်ရကောင်းလားဆိုပီးလည်း အထင်လွဲမှုတွေလည်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်လို့ ကျနော်လည်း မစဉ်းစားတတ်တော့ပါဘူး... :29:
စဉ်းစားကြည့်လေဗျာ... spyware ကပ်နေတဲ့ မေးလ်တစ်စောင်ကို ထပ်ဆင့်ထပ်ဆင့် forward လုပ်ပေးနေကြရင် ဘယ်လောက်လူတွေ တော်တော်များများ ထိကုန်မလဲဆိုတာကို.... :17:
ကိုယ်နဲ့သိတဲ့လူရဲ့မေးလ်ကိုမှ ဖွင့်ကြည့်ပါ။ ဒါဆိုအထင်လွဲမှုဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ မသိတဲ့လူဆိုရင် မကြည့်တာကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ အပေါ်မှာပြောထားသလိုပဲ email အကောင့်ကို နှစ်ခု သုံးခုလောက်ဖွင့်ပြီး ကိုယ့် အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အကောင့်ကို အခင်မင်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေကိုသာ ပေးပါ။ ကျန်အကောင့်ကို ချက်ဖို့လောက်တင်ထားပါ။ spyware remover ကိုသုံးပါ။ email တွေကိုပါစစ်ပေးတဲ့ ဟာတွေအများကြီးပါ။ forward လုပ်ခြင်းဖြင့် ကိုယ့်အကောင့်ကိုလူသိနိုင်သဖြင့် အခင်မင်ဆုံးသူငယ်ချင်းများကိုလည်း forward လုပ်ချင်က ကျန်အကောင့်ကိုသာ လုပ်ပါဟုကြိုပြောထားခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
ခက်တာက လက်ရှိအကောင့်ကို မခွာနိုင်ဖြစ်နေတာ.... :106:
မခွာနိုင်ဖြစ်နေတာက ကောင်မလေးနဲ့အသွားအလာလုပ်ထားတဲ့စာတွေက ရာချီရှိနေတော့ နှမြောတာပါ...
အဲ့ဒီမေးလ်တွေကို တခြားအကောင့်ထဲကို သူ့မူရင်းအကောင်းအတိုင်း ပြောင်းလို့ရနိုင်ရင်လည်း နည်းလမ်းလေးပေးပါအုံး....
ကျနော်သုံးနေတာ Gmail ပါခင်ဗျာ.....
ကျနော်က အဲ့ဒီစာလေးတွေ အဖျက်ခံထိမှာပဲ လန့်တာဗျ.... :2:
mail စသုံးကတည်းက ဒီလိုတွေးမိရင် လူတကာကို လိုက်မပေးမိပါဘူးဗျာ....
အခုမှ နောင်တရကောင်းမှန်း သိတော့တယ်....